Ogaden Online: The official homepage of Ogaden on the Internet - Maxaad u baahantahay inaad ka ogaato kolestaroolka
Text size	Home Horn NewsDjibouti Somalia Eritrea Kenya Ethiopia Ogaden WararkaOgaden Itoobiya Soomaaliya Kenya EntertainmentMusic HealthDiet and Fitness You and Your Family Commentary & AnalysisEditorial Opinion Community EventsWararka Tacsi Tahniyad Ogeysiis Announcement Radio Xoriyo Radio ICDSabti Axad Isniin Arbaco Radio Qorahay Home Health Diet and Fitness Maxaad u baahantahay inaad ka ogaato kolestaroolka
Maxaad u baahantahay inaad ka ogaato kolestaroolka	Sunday, 17 January 2010 02:39	administrator	Kolesterool waa walax dufan u eeg oo uu sameeyo beerkaagu lagana helo cuntada aad cuntid. Tirada guud ee kolesteroolka ee ka soo baxda baadhitaanka dhiiggaaga waxay u kala qaybsan tahay saddex nooc:Kolesteroolka HDL (high density lipoprotein) (Kan waxa loo yaqaana kolesteroolka “fiican.”)Kolesteroolka LDL (low density lipoprotein) (Kan waxa loo yaqaana kolesteroolka “xun.”)Triglycerides (Kani waa dufan ka yimi cuntada oo dhiiggaaga ku darsama. Jidhkaaga ma siiyo tamar loomana kaydiyo baruur ahaan.)Baadhitaanka KolesteroolkaWaa in lagaa baadho kolesteroolkaaga guud iyo HDL marka da’daadu tahay 20 jir. Iyada oo ku saleysan naatiijooyinka baadhitaankaaga, da’daada iyo qodobada halista, waxa uu dhakhtarkaagu ku talin karaa in laguu sameeyo baadhitaan dheeraad ah. Waxa kale oo uu kuu sheegi doonaa inta jeer ee la rabo in lagu celiyo baadhitaanka.Haddii natiijada ka soo baxda baadhitaanka tirada guud ee kolesteroolka /HDL ay noqoto mid “aan caadi ahayn,” waxa laga yaabaa in loo baahdo in lagaa qaado baadhitaan buuxa oo ah tirada dufanka adiga oo qatan. Baadhitaankaasi waxa uu hubin doonaa tirada guud ee kolesteroolkaaga, triglycerides, HDL iyo LDL. Muhimadda LDL iyo HDLMarka wax badan oo ah LDL (kolesteroolka “xun”) ku sameysmo darbiyada arooriyeyaashada, waxa sameysa lakabyo kuwaasoo xidha socodka dhiigga ee xididada aada wadnaha, lugaha iyo maskaxda. Taasi waxay keeni kartaa cudur wadnaha ku dhaca, cudur xididada dhiigga ee sheedaha ku dhaca iyo faalig ama xidid ku dhex qarxa maskaxda.Tilmaamaha uu National Cholesterol Education Program ((Barnaamijka Waxbarashada ee Kolesteroolka ee Heer Qaran)) u soo jeediyay heerarka kolesteroolka LDL waa:Heer fiican: wax ka yar 100 mg/dL U dhow heer fiican: 100 ilaa 129 mg/dL U dhow heer sareeya: 130 ilaa 159 mg/dL Heer sareeya: 160 iyo 189 mg/dL Heer aad u sareeya: 190 mg/dL iyo wax ka sareeya.HDL (koolesteroolka “fiican”) waxa uu gargaar ka geystaa in kolesteroolka dheeraadka ah laga sifeeyo dhiiggaaga iyo xubnaha jidhkaaga. Heerarka sare ee HDL waxa laga yaabaa inay ka hortagaan ama caadi ka dhigaan dhibaatooyinka xididada dhiigga.Tilmaamaha uu National Cholesterol Education Program ((Barnaamijka Waxbarashada ee Kolesteroolka ee Heer Qaran) ) u soo jeediyay heerarka kolesteroolka HDL waa:40 mg/dL ama wax ka sareeya oo ah ragga50 mg/dL ama wax ka sareeya oo ah haweenka. Sidee kolestroolku ugu xirantahay cudurada wadnahaWaxaa jira waxyaalo halis ku ah wadnahaaga. Kuwaas waxaa ka mid ah de’ da, taxanaha qoyska oo leh cudur wadanaha ku dhaca, dhiig kar, HDL hooseeya iyo halisaha kale sida sagaar cabidda. Lahaanshaha HDL hooseeya iyo LDL sareeya micneheedu waxaa weeye xubaabka derbiyada aroorayaashaadu ma jajabayaan. Marka xuub xiro socodka dhiiga ee wadnaha, waxa kugu dhici kara wadne istaag. Buuxi shaxdan oo ha kula fiiriyo dhakhtarkaagu balanka soo socda.Xaaladaha Kordhiya Halista Cudurka WadnahaKuwan soo socdaa waa xaalado kordhiya halista cudurka wadnaha.Da’ iyo jinsi: Ragga da’doodu tahay 45 ama ka weyn...Dumarka da’doodu tahay 55 ama ka weyn ——ama dumarka hore u dhalmadaayay ee aan dawo hormoon (hormone) ah qaadanTaariikh qoysku u lahaa cudurka wadnahaAabaha ama qaraabo soke oo rag ah oo ka ——yar da’da 55 oo cudurka lagu arkayHooyada ama qaraabo soke oo haween ah oo ——cudurka lagu arkay oo ka yar da’da 65 sannadoodSigaar cabid Dhiig kar (cadaadis dhiig oo sareeya)Kolesteroolka HDL oo hooseeya (ka yar 40 mg/dL) Sonkor ama kaadi-macaan. Sidee Baad Caadi Uga Dhigi Kartaa Kolestaroolkaaga??????Si aad u xoojisid HDL-kaaga (kolesteroolka “fiican”) oo aad hoos ugu dhigto LDL-kaaga (kolesteroolka “xun”), waxa uu ‘National Cholesterol Education Program’ (Barnaamijka Waxbarashada ee Kolesteroolka ee Heer Qaran) ku siinayaa talooyinka soo socda:Kordhi HDL:Dhin miisaankaaga haddii uu aad u sarayo. Jooji sigaarka haddaad cabtid. Jimicsi samee in badan. Yaree LDL:Dhin miisaankaaga haddii uu aad u sareeyo. Yaree dufanka cokan ee ku jira cuntaada. Yaree kolesteroolka ku jira cuntadaada.Dufka (fiber) ku badi cuntaada. Yoolalkaaga Kolesteroolka Isku-darka kolesteroolkaoo ka yar 200 mg/dL Heer “fiican” oo kaa yareynaya halista cudur wadnaha ku dhaca. Heer kolesterool oo ah 200 mg/dL ama ka weyn waxa uu kordhinayaa halistaada. HDL (kolesteroolka “fiican”)oo ka weyn 40 mg/dL HDL ah 40 mg/dL ama ka sareeya ayaa lagu taliyay si aad uga badbaadid cudur wadnaha ah. (Haweenku waa inay ku talogalaan hadaf HDL oo ah 50 mg/dL.) LDL (kolesteroolka “xun”)oo ka yar 130 mg/dLHeer “fiican” waa heer laga soo qaadi karo inuu kaa badbaadinayo cudur wadne. Triglycerideska yar 150 mg/dL Heer “fiican” oo kaa yareynaya halista cudur wadnaha ku dhaca. *LDL ka yar 100 mg/dL ayaa lagu taliyay haddii aad qabtid sonkor/sonkorow. LDL ka yar 70 mg/dL ayaa lagu taliyay haddii aad qabtid sonkor/sonkorow iyo cudur wadnaha ah ama haddii aad qabtid wadne qabasho ama faalig (stroke). Tweet
Last Updated ( Sunday, 17 January 2010 03:11 )
We have 22 guests online	Resources